कति छ आज सुनको मूल्य ? - dautarimedia.com
शुक्रवार नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ ।यस दिन छापावाल सुन प्रति तोला ९१ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
अघिल्लो दिन यस्तो सुन प्रति तोला ९० हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस दिन तेजाबी सुन प्रति तोला ९० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।अघिल्लो दिन यस्तो सुन प्रति तोला ९० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
महासंघका अनुसार शुक्रवार १ हजार १ सय ९५ रुपैयाँ प्रति तोलामा चाँदी कारोबार भइरहेको छ । अघिल्लो दिन चाँदी प्रति तोला १ हजार १ सय ८० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
थप समाचार : अफ’गानिस्तानमा रहेका नेपालीहरु भन्छन पा’उरोटी खाएर बाँचेका छौँ हाम्रो उ’द्धार ग’रिदिनुहोस्..मेरो नाम दीपेन्द्र श्रेष्ठ हो । मेरो सि’न्धुपाल्चोक जिल्ला हो । तर अहिले म अफगानिस्तानमा आफ्नो देश फर्कंन दिन कुरिरहेको छु ।यहाँबाट कति साथी नेपाल पुगिसके । कति’पय साथीहरू जाने तयारीमा छन् । तर हामी त यहाँबाट फर्कन पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ थाहा छैन ।
मसहित विभिन्न ठाउँका साथीहरू सु’रक्षा गार्डको काम गर्न भनेर गएको चैतमा अफगानिस्तान आइपुगेका हौँ । एजेण्टले हामीलाई काठमाण्डौबाट दुबई ल्याए ।त्यहाँ ३७ दिन राखेर यहाँको भिसा लगाएर हामीलाई यहाँ सुरक्षाको काममा भनेर ल्याए । सुरुवातमा त २५ जना जति थियौँ हामी । उनीहरू मध्ये कतिपय काममा लागेका छन् । काममा लागेकाहरूसँग हाम्रो सम्पर्क छैन । अहिले हामी १० जना काबुलको एउटा होटलमा बसिरहेका छौँ । यहाँ बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, सि’न्धुपाल्चोक लगायतको ठाउँका साथीहरू छौँ ।
यहाँ आएर यसै बसेको पनि पाँच महिना पूरा भयो । होटलको कोठा भित्र छौँ । अहिले बाहिर निस्कन पाइँदैन । होटलको कोठामा बसेर नै समाचारहरू हेर्छौँ ।यहाँ आएका मसहित मेरा साथीहरू धेरैजसो अवकाशप्राप्त प्रहरी, आर्मी हुनुहुन्छ । क’तिपयले त राजीनामा दिएर समेत आउनुभएको छ ।
यहाँ आइपुगेका हामी सबैले एजेण्टलाई १७ देखि १८ लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका छौँ । बढीमा एक महिनाभित्र काम लगाइदिन्छु भनेको थियो तर आज हुन्छ भन्छ, भोलि हुन्छ भन्छ । काम पाइएला भन्ने आसमा कुर्दा कुर्दै अहिले त ज्यान मात्रै पनि स्वदेश फर्कने हो कि होइन भन्ने चिन्ता सुरु भएको छ ।बाहिर के भइरहेको छ आँखाले देखिएको छैन । तर जति समाचार हेर्‍यो, उति डर लाग्छ । हामी यहाँ बिचल्ली अवस्थामा छौँ ।
होटलले नै पाउरोटी दिन्छ, तरकारीमा आलु दिन्छ त्यही खाएर बाँचेका छौँ । बेलुका मैदाको रोटी बनाएको हुन्छ त्यही खान्छौँ । बिहान चामल र दुई चार वटा आलु दिन्छ त्यही पकाएर खान्छौँ । डेढ महिना भयो आलुभन्दा दोस्रो कुरा खान पाएको छैन । यहाँको स्थिति ख’राब छ । न’भिसा छ, न त एजेण्टको भर । के गर्ने होला सोच्न सकेका छैनौँ ।
एजेण्टलाई हामीलाई घर फ’र्काइदिनुस् भन्दा यहाँबाट तिमीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान्छु भन्छ । तर कहाँ लग्छ यो यु’द्ध भूमिबाट थाहा छैन ।हामीलाई स्वदेश फर्कन पहल गरिदिनुहोस् भन्दा पनि यूएन आएर तिमीहरूलाई लैजान्छ भन्छ एजेण्टले । साँच्चै यूएन आउला त हामीलाई लिन ?
अफगानिस्तानमा अवस्था सामान्य हुँदासम्म एजेण्टले हाम्रो कागजपत्र लगेको थियो काम खोज्न भनेर । तर अहिले त त्यो कागजात पनि हामीलाई नै ल्याएर दिइसक्यो । कागजात हामीलाई दिएर एजेण्ट भने नेपाल फर्किसकेको हामीले बुझेका छौँ ।तै पनि यहाँका अन्य एजेण्टलाई मैले उ’द्धारको लागि भनिरहेको छु । उसले आनाकानी गरिरहेको छ । उसले हाम्रो उद्धार गर्न मानेकै छैन । अहिले त स्थिति यस्तो छ कि हाम्रो भिसा सकिएको डेढ महिना भयो ।
वि’मानस्थल पनि बन्द छ । टिकट पनि छैन, जहाज पनि छैन । एजेण्टले भनेजस्तै यूएन हामीलाई लिन आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि थाहा छैन ।घरतिर रूवाबासी छ,हाम्रो अवस्था यहाँ यस्तो छ । उता घरमा पनि अहिले त सबै कुरा थाहा भइसकेको छ । सम्झाउन त स’म्झाएका छौँ । तर बाहिरको जुन परिस्थिति छ, जस्ता खबरहरू आइरहेका छन् । त्यसले परिवारलाई त्रसि,त बनाएको छ ।
परिवारलाई हामी चिन्ता छ । हामीलाई दुई तिरको । महिनाकै लाखभन्दा धेरै कमाइ हुन्छ भन्दै ल्याएर एजेण्टले यो हाल बनाइदियो । अब जसरी भए पनि घर फर्कन पाए हुने थियो । सरकारले हाम्रो उ’द्धार गर्छ गर्दैन थाहा छैन । तर आलु र पाउराेटी मात्र खाएर यसरी कति दिन बाँचिन्छ थाहा छैन ।हामी यहाँबाट यही भन्छौँ कि हाम्रो पनि उ’द्धार गरिदिनुहोस्, यहाँ हाम्रो कोही छैन ।
Previous: ट्याक्सी चालक’की छो’री अस्मिताले पाइन विश्वको म हङ्गो स्कुलमा पढ्ने मौका
Next: कैलाली: दिदिको छोराले कोहि नभएको मौका छोपी १३ बर्षिया सपनालाई…. (भिडियो हेर्नुस)